December 6, 2021 sonsonlinlin 0
ေပါင္းဖက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ားနဲ႔ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ား ေဈးသုံးလည္းမလြယ္နဲ႔၊ ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း မဂၤလာျပဳသင့္တဲ့ ရက္ျမတ္ေတြကို ေဝမၽွ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ျမန္မာတို႔ရဲ့ ထုံတမ္းအစဥ္အလာမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္ထပ္ထိမ္းျမားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေဗဒင္ေတြေမးၿပီးျပကၡဒိန္ေတြ ၾကည့္ကာ ေန႔ေကာင္းရက္သာေတြ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို ထုံးတမ္းစဥ္လာက ေရွးအရင္အခ်ိန္တည္းက လူႀကီးမိဘေတြ ျပဳလုပ္လာၾကတဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ အယူအဆေတြ သိပ္မရွိေတာ့ဘူးဆိုေပမယ့္ ေဈးသုံးလည္းမလြယ္နဲ႔၊ ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ […]
အသက္ငယ္တုန္း လက္မထပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္း (၆)ခ်က္
အသက်ငယ်တုန်းလက်မထပ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း(၆)ချက် အသက်ငယ်တုန်းလက်မထပ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း(၆)ချက်ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာမမေ့သာငယ်ကပေါင်းအနှစ်တစ်သောင်းမမေ့ကောင်းဆိုတဲ့ဆိုရိုးကိုကြားဖူးကြမှာပါ မြန်မာဓလေ့မှာငယ်လင်ငယ်မယားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလည်း ရှိပါတယ်မြန်မာ့အယူအဆမှာ အသက်ငယ်တုန်းလက်ထပ်တာဟာလည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ် ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်မှာအသက်ငယ်တုန်းလက်ထပ်လည်းမကောင်းတော့ပါဘူးအများစုသတ်မှတ်ထားတဲ့ အရွယ်ဟာ၂၆နှစ်ကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်ထပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်1.အဆင်သင့်မဖြစ်သေးအသက်၂၀လောက်မှာ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။မိဘကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူများကကိစ္စမရှိပါဘူးကမန်းကတန်းယူလိုက်ရတဲ့လင်မယားများကတော့အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်ငွေကြေးလည်းအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသလို နေထိုင်စရာအတွက်လည်း စိတ်မချရသေးပါဘူး။2.စိတ်ဖိစီးမှုများနိုင်လခထုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့အိမ်လခရေမီတာစားစရိတ်သုံးစရိတ်သာရေးနာရေးစတာတွေကိုအမြီးနှုတ်ခေါင်းနှုတ်နဲ့လုံလောက်တဲ့စုဆောင်းငွေကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာ ငွေလိုခဲ့ရင်လည်းခေါင်းပေါ်ကိုအထုပ်ကြီးကြီးပိလာနိုင်ပါတယ်။3.ဘဝအခြေမခိုင်။ငယ်တုန်းမှာတက်လမ်းများများရှာထားပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးအိမ်ထောင်ရေးကကြားဖြတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ သင့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ကလည်း နှောင့်နှေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်4.ဒေါသဖြစ်လွယ်အရမ်းချစ်လို့ယူထားကြပေမယ့်အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့အခါသင့်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် အပြစ်ပုံချချင်စိတ် ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဖွင့်မပြောဖြစ်ရင်တောင်မှ သင်ဟာအိမ်ထောင်သည်ဘဝကိုသိပ်မနှစ်သက်တော့ပါဘူး5. သားရေးသမီးရေးကလေးမရှိတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေကစိတ်မပူရပါဘူးအိမ်ရဲ့ရတနာလေးတွေဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ထိန်းဖို့အချိန်မပေးနိုင်တာထိန်းမယ့်သူရှိရင် တောင်ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ပိုမိုကြိုးစားရှာဖွေရတာတွေ ဖြစ်လာပါပြီ6အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်သင်ကခြေကပ်လက်ကပ်ထားချင်ပေမယ့်စုစရာရယ်လို့ပိုလျှံငွေမရှိတဲ့အခါမှာ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်ရှေ့ကရှာလိုက် နောက်က ကုန်လိုက် ဖြစ်နေတာကြောင့်သင့်ဆီမှာအဖတ်တင်တာသိပ်မရှိနိုင်ပါဘူးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာအိမ်ထောင်ပြုဖြစ်တာထက်သင့်ဘဝအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့လမ်းကြောင်း တစ်ခုပေါ်ရောက်ပြီးစိတ်မပူရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလက်ထပ် တာဟာသင့်အတွက်ရောသင့်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Credit Zawgyi အသက္ငယ္တုန္းလက္မထပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္း(၆)ခ်က္ အသက္ငယ္တုန္းလက္မထပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္း(၆)ခ်က္ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာမေမ့သာငယ္ကေပါင္းအႏွစ္တစ္ေသာင္းမေမ့ေကာင္းဆိုတဲ့ဆို႐ိုးကိုၾကားဖူးၾကမွာပါ ျမန္မာဓေလ့မွာငယ္လင္ငယ္မယားဆိုတဲ့အသုံးအႏႈန္းလည္း ရွိပါတယ္ျမန္မာ့အယူအဆမွာ အသက္ငယ္တုန္းလက္ထပ္တာဟာလည္းေကာင္းတယ္ဆိုၿပီးေျပာစမွတ္ျပဳၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ […]
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်စီ စစ်ကောင်စီတရားရုံး ချမှတ်
Breaking News- နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်စီ စစ်ကောင်စီတရားရုံး ချမှတ် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကို ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်စီ စစ်ကောင်စီတရားရုံးက ချမှတ်လိုက်ကြောင်း AFP သတင်းနှင့် ဘီဘီစီသတင်းများအရ သိရှိရသည်။ AFP က စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိုးကား၍ သတင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ဘီဘီစီသတင်းအရမူ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က […]
အခြေအနေ အရမ်းဆိုးနေတဲ့ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာသွားစေမယ့် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း (၄)မျိုး
အခြေအနေ အရမ်းဆိုးနေတဲ့ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာသွားစေမယ့် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း (၄)မျိုး ပျိုမေတို့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်တဲ့အခါ ထိန်း သိမ်းရ အခက်ဆုံးက ထိခိုက် လွယ်တဲ့အသားအရေလို့ ထင်တတ် ကြ ပါ တယ် ။ တကယ်တော့ ထိခိုက် လွယ်တဲ့ အသားအရေထက် ပိုဆိုးတာ ရှိ ပါ တယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ အမြဲတမ်း ဝက်ခြံထွက် တတ်တဲ့ အသားအ […]
သမီး ( ၃ ) ယောက် နဲ့ လူရှုပ်တစ်ယောက် ရဲ့ အဖြစ်
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ သမီး ၃ ယောက်မွေးထားတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ အဲဒီရွာမှာပဲ မြို ကရောက်လာတဲ့ အင်မတန်အပြောကောင်းပြီး အလုပ်မလုပ်ပဲ လိမ်ညာစားသောက်နေတဲ့ ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ လူရှုပ်တစ်ယောက်လည်း ရှိသတဲ့…… ကျေးလက်ဒေသရဲ့ဓလေ့စရိုက်အရ ရွာသူရွာသားတွေဟာ အင်မတန်လည်း ရိုးသားကြပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အဒေါ်ကြီးရဲ့ သမီးအကြီးဆုံးဟာလူရှုပ်နဲ့ အကြောင်းပါပါလေရော….. လူရှုပ်လူလည်ကလည်း သူ့ထုံးစံအတိုင်း ယောက်ခမ နဲ့ ခယ်မတွေကိုပါ အဆင်ပြေအောင်ပြောဆိုစည်းရုံးပြီး တစ်အိမ်လုံးရဲ့မေတ္တာကို ရအောင်ယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာလူရှုပ်ရဲ့ဇနီးဟာ အမျိုးသမီးရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ပါတယ်…. မိန်းမဖြစ်သူရဲ့အသုဘမှာလူရှုပ်ဟာ […]
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး ယောကျ်ားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားတွေပဲရှိတယ် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး..။ ယောကျ်ားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားတွေပဲရှိတယ်..။ မိန်းမ စကားအရမ်းနားထောင်နေလိုသင့်ကို သင့်friတွေမယားကြောက်လို့အမည်တပ်ပေမယ့်..၊ ဘာကြောင့် လဲ သင့်မှာသင့်မိသားစု သင့်ကလေးကိုငဲ့လို့ သင့် သင်friတွေနဲ့လျောက်မသွားတဲ့အခါ.. သင့်အမည်တပ်ခံရပေမယ့် သင့်ကလေးတွေဇနီးအတွက်တော့ ယောကျ်ားကောင်းဖြစ်နေမှာပါ..။ အချိန်တန် သင်နေမကောင်းအိုနာလာရင် သင့်ဇနီးနဲ့သင့်ကလေးတွေကပဲ သင့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်..။ မကောင်းတဲ့friအများစုကတော့ သင့်ကိုမယားကြောက်လို့အမည်တပ်လိမ့်မယ်..။ သင့်မိသားစုအတွက် သင်ဟာ ငါအဖေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့ သားသမီးတွေဇနီးတွေရဲ့ချစ်ခြင်းခံရမှာပါ..။ Zawgyi အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး […]
ယခုေခတ္ ျမန္မာမိန္းကေလးအမ်ားစု ဘယ္လို ေရတိမ္နစ္သြားရသလဲဆိုတာ သိေစခ်င္လို႔ ဒီpostကို တင္ရတာပါ
ခုခေတ်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးအများစု ဘယ်လိုဘဝပျက်သွားသလဲဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီ post ကို တင်ရတာပါ ။ အစအဆုံးဖတ်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်ပါနှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင်ပေါ့ ” အရမ်းချစ်တယ် ချစ်ရယ် “” မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးပါနော့်”” ဟင်အင်း မောင် ”” ချစ် ကြောက်တယ် မလိုက်လျောပါရစေနဲနော် မောင် “” ချစ်ကလည်းကွာ “” မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါကွာ ” “ဟင်အင်း […]
ကိုယ်လွတ်မြောက်ရေးထက် လူနာကို ပြုစုကုသရင်းဖမ်းဆီးခံသွားသူ အင်းစိန်ကြက်ခြေနီသူနာပြု ၊ GTC ကျောင်းသူ မမြကြူကြူသင်း
ကိုယ်လွတ်မြောက်ရေးထက် လူနာကို ပြုစုကုသရင်းဖမ်းဆီးခံသွားသူ အင်းစိန်ကြက်ခြေနီသူနာပြု ၊ GTC ကျောင်းသူ မမြကြူကြူသင်း By ရန်ကုန်ခေတ်သစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ကြည့်မြင်တိုင်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ စစ်ကောင်စီက ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကို ကားနဲ့တိုက်သတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားချိန်မှာ မမြကြူကြူသင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စု အဲဒီဖြစ်ရပ်နားမှာ ရှိနေပါတယ်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ လူငယ်တွေကို စစ်ကားက ဝင်တိုက်သွားချိန်မှာ မမြကြူကြူသင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်အာကာကျော်လည်း ကားတိုက်ခံရပြီး လွင့်စင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူတွေလည်း အနည်းနဲ့အများဆိုသလို […]
မြန်မာ့ သမိုင်းတလျောက် မင်းလောင်းပေါ်ခါနီး လျှင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ထင်ရှားသော တဘောင်ကြီး (၅)ခု
တဘောင် ပေါ်သည့်အတိုင်းလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြသည့် မင်းများမှာ ၁။ပုဂံခေတ်( စီးချင်းထိုးလျက် မျိုးမင်းထွက် ပြည်တော်သာလိမ့်မယ်။)ထို”တဘောင်” ပေါ်ပြီးနောက် “အနော်ရထာ” မင်းလောင်းသည် ဦးရီးတော် စုက္ကတေးမင်းနှင့် စီးချင်းထိုးခဲ့သည်။ စုက္ကတေးမင်းအား အနိူင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အနော်ရထာသည် ပုဂံပြည့်ရှင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ထိုမင်းလက်ထက်တွင် သာသနာရောင်ဝါထွန်းလင်းပြီးဆန်ရေစပါးပေါများ ကာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သည်။ ၂။အင်းဝခေတ်( အင်းအိုင်ထဲက လူတစ်ယောက်မီးတောက်ကလေးကိုင်လို့ပေါက်)ထို” တဘောင်” ပေါ်ပြီးနောက် “သတိုးမင်းဖျား “သည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာကာ နန်းတော်ကို အင်းဝမြို့၌ တည်ခဲ့သည်။ ထိုမင်းသည် လည်း နယ်ပယ်အများအပြားကို သိမ်းပိုက်ကာဘုန်းမီးနေလတောက်ပခဲ့သည်။ […]
အပ်ိဳေလးေတြမသိေသးတဲ့ မဂၤလာဦးည မ်က္ကြင္းေတြညိဳၿပီး သတိပါလစ္သြားခဲ့ရေသာ သတို႔သမီး
မင်္ဂလာဦးည (၃)ဦးအကြောင်း အပျိုလေးတွေမသိပါဘူး ပူပူနွေးနွေး မင်္ဂလာဆောင် ပြီးကာစ ကောင်မလေးကို သူ့သူငယ်ချင်း အပျိုမ တစ်သိုက်က တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးသည်။ “ဟဲ့… နင့်မှာ မျက်တွင်းတွေကိုကျလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်ဘူးလား??? မင်္ဂလာဦးည အတွေ့အကြုံလေး ငါတို့သိရအောင်ပြောပြပါလား?” “တော်ပါပြီဟာ မပြောချင်ပါဘူး” “ပြောပါဟာ နင်ကလည်း ငါတို့တွေဗဟုသုတရတာပေါ့” “အို… ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရမှာ ရှက်စရာကြီး” “ပြောပါဟာ နင်ကလည်း… အချင်းချင်းတွေပဲဟာ” “ဒီလောက်တောင်သိချင်နေကြလည်း ပြောပြမယ်ဟာ။ မနေ့ညက တစ်ညလုံးမအိပ်ရဘူးဟ” “ဟင်… ဒီလောက်တောင်လား!!!” […]